नेपालमा कोरोना : सङ्क्रमित ६१ जना आईसीयूमा, १३ जना भेन्टिलेटरमा
बिहिवार, फाल्गुन ६, २०७७ जनता नेपाल
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.जागेश्वर गौतमले हाल कोरोना सङ्क्रमित ६१ जना आईसीयूमा र १३ जना भेन्टिलेटरमा उपचारार्थ रहेको बताएका छन्।
कोभिड १९ सम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. गौतमले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा पछिल्लो चौबीस घण्टामा ६० जना सङ्क्रमित थपिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भक्तपुरमा छ, ललितपुरमा नौ र काठमाडौंमा ४५ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो ।
नेपालमा कोरोनाभाइरसका १२५ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा तीन हजार ८३८ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा १२५ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबीस घण्टामा ९१ जना सङ्क्रमित सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । उक्त मुक्त भएको संख्यासँगै नेपालमा कोरोनामुक्त भएकाहरुको संख्या दुई लाख ६९ हजार ३९४ पुगेको छ । जुन कुल सङ्क्रमितको ९८.७ प्रतिशत हो । हाल एक हजार ६२१ जना आइसोलेशनमा छन् । जसमध्ये ९९१ जना संस्थागत् आइसोलेशनमा र ६३० होम आइसोलेशनमा छन् ।
मन्त्रालयले गत् बुधबार यता १४ हजार २४० जनाको नमूना सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएकोमा ४५६ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको जनाएको छ । सोही अबधिमा ४६५ जना सङ्क्रमित सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । नेपालमा हालसम्म २१ लाख २७ हजार ७८९ जनाको नमूना सङ्कलन गरी आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिवार, फाल्गुन ६, २०७७, ०७:३४:३४
नेपालमा कोरोना : कोरोना संक्रमणबाट आज १ जनाको मृत्यु, ८७ जना संक्रमित नयाँ थपिए
पिसाब पोल्ने वा दुख्ने समस्या छ ? यस्तो छ, कारण र घरेलु उपचार
नेपालमा कोरोनाभाइरसका ८१ जना सङ्क्रमित थपिएका छन् । पछिल्लो चौबीस घण्टामा दुई हजार ८२४ जनाको आरटीपीसीआर परीक्षण गरिएकोमा ८१ जनामा सङ्क्रमणको पुष्टि भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालमा कोरोना: २४ घण्टामा ११२ जना कोरोना संक्रमित
शुक्रवार, फाल्गुन १४, २०७७ जनता नेपाल
नेपालमा आज थप ११२ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा ३९४४ जनाको गरिएको पीसीआर परीक्षणमा ११२ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो । पुरा पढ्नुहोस्